५६ वर्षअघि यसरी फुटेको थियो नेकपा, यस्तो छ नेकपाको टुटफुटको ईतिहास !::सुनौलो न्यूज
५६ वर्षअघि यसरी फुटेको थियो नेकपा, यस्तो छ नेकपाको टुटफुटको ईतिहास !
१० वैशाख ००६ मा गठन
१० वैशाख ००६ अर्थात् २२ अप्रिल १९४९ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारतको कोलकातामा स्थापना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । पुष्पलालसहित निरञ्जनगोविन्द वैद्य, शम्भुराम श्रेष्ठ र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक थिए । कतिपयले मोतीदेवीलाई संस्थापक मानेका छैनन् । ००६ देखि ०१९ सम्म १३ वर्ष पार्टी केही आन्तरिक विवादबीच एकै धारमा अगाडि बढ्यो ।
तुलसीलाल अमात्यले नेतृत्व गरेको अमात्य समूह, मानन्धर समूह र बर्मा समूह मिलेर नेकपा संयुक्त गठन भयो । बर्मा र अमात्य अलग–अलग एमालेमा प्रवेश गरे । बर्मा अहिले स्वतन्त्र छन् ।